DH Lawrence. Mukadzi waLady Chatterley mumitsara gumi neshanu. | Zvazvino Zvinyorwa
DH Lawrence. Mudiwa waLady Chatterley mumitsara gumi neshanu.
Icho chiitiko chitsva cheiyo kuberekwa muna 1895 weDH Lawrence, munyori weChirungu we Anoda Mukadzi waChatterley, basa rake rakanyanya kumiririra. Yakapiswa inonyadzisa uye yakaongororwa munguva yayo uye munyika zhinji, ino novel nhasi paradigm yemabhuku eerotic, pamusoro pechidzidzo chezvemagariro nezvekurwira mukirasi uye nekupihwa simba kwevakadzi. Ini ndinoiongorora ichiratidza Makumi matatu emitsara yake.
2 Anoda Mukadzi waChatterley
2.1 15 mitsara
Akanga ari mwanakomana wemugodhi uye mudzidzisi uye akadzidza paYunivhesiti yeNottingham muna 1908. Makore matatu gare gare akaburitsa bhuku rake rekutanga, Iyo chena turkey. Muna 1912 basa rake rechipiri rakaonekwa, Mupambi. Icho chaive chekutanga kunyadzisa kukuru nekuda kwe tsananguro dzakajeka dzezviitiko zvepabonde. Izvi zvakaratidza mabasa ake akazoitika uye izvo zvakaramba zvichikonzera matambudziko mazhinji nekudzvinyirira uye hunhu hwenguva iyoyo.
En 1913 yakabudiswa Vana nevadikani, mufananidzo wehudiki hwake uye kuratidzwa kwekunetsekana kwake nezve izvo zvingagone kutaurwa nevemaindasitiri. Ipapo kwakauya Muraraungu, Yakarambidzwa necensorship yenyika yako. Izvi zvakamumanikidza kuti aende. Akanyora Tsvimbo yaAroni kuItaly, mushure meHondo Yenyika Yekutanga, uye ndokuenderera mberi nekunyora vhoriyamu yekushoropodzwa kwemabhuku.
Uye kubva ipapo akaenda kuAustralia kwaakanyora Kangaroo. Ipapo akatamira kuMexico, nzvimbo nenzvimbo zvakamukurudzira. Nyoka ine minhenga. Paakadzokera kuFlorence, akanyora Mudiwa waLady Chatterley, iyo yaakaburitsa muna 1928, rake rinozivikanwa basa uye rakakonzera, pakati pevamwe, Henry Miller. Akafira muFrance kubva kuTB.
Anoda Mukadzi waChatterley aive inorambidzwa makore makumi matatu muGreat Britain neUnited States, achipomerwa zvinonyadzisira uye zvisina hunhu. En España yakatenderedzwa nenzira muchivande zvisinei nekudzvinyirira muhudzvanyiriri. Kusimudzirwa kwe kukosha kwepabonde kune vese varume kana vakadziNdinozviziva kuti Lawrence zvakajeka uye pachena zvaive zvisina kuseka kana nyore kune nzanga yenguva iyoyo.
Nhasi uchiri kuwana maitiro akasiyana-siyana pakati pevaverengi. Kune avo vanoramba vachiona sebasa rakakosha reAnglo-Saxon zvinyorwa uye nezvayo kuputsa pasi kana hunhu hunhu zvine chekuita nenyaya dzadzinobata. Asi kune vamwewo vanotozvifunga yechinyakare yenguva ino yazvino uye yakanyanyisa kuwedzererwa.
Zera redu rinosiririsa, uye ndosaka tichiramba kuzvitora zvinosiririsa. Dambudziko rakaitika kare, tinozviwana tiri pakati pematongo, tinotanga kuvaka nzvimbo nyowani dzekugara, tinotanga kuva netariro diki. Haisi basa riri nyore. Hatina pamberi pedu nzira yakatwasuka inotungamira kumberi. Asi isu tinodzivisa kana kukunda zvipingamupinyi. Tinofanira kurarama, kunyangwe mangani matenga awira pamusoro pedu. Izvo zvinopfuura kana zvishoma chinzvimbo chakatorwa naConstance Chatterley.
Muviri wake wese wainge wave kuora, kurema, kupenya, chinhu chisina basa. Kwakamuita kuti anzwe akaora mwoyo zvakanyanya uye asina tariro. Ndeipi tariro yandaigona kuva nayo? Aive achembera, achembera aine makore makumi maviri nemanomwe, asina kana spark kana kupenya munyama yake. Yakare kubva pakusiiwa kwakanyanya uye kwakanyanya kusiya basa; hongu, kurega basa. Vakadzi vefashoni vaichengeta miviri yavo ichipenya kunge porcelain isina kusimba, yekutariswa kwekunze. Mukati mevhu rakavezwa hapana; Asi iye akange asina kana kupenya ikoko Hupenyu hwepfungwa! Pakarepo akavenga hunyengeri uhwu nehasha!
Kune chaiko vazhinji venyu pano neni zvekuti zvinonyadzisa kuti hamusi mese padivi pangu.
Akanzwa kupera simba uye kusiiwa asingagumi. Aida kuti chinhu chiuye kubva kunze kuzomubatsira. Rubatsiro kuti hapana nenzira yakapihwa. Sosaiti yaityisa nekuti yaipenga. Hupamhi hwevanhu hazvina maturo. Mari uye runonzi rudo ndiwo mabhii maviri ake makuru; nemari zvakanyanya kutungamira. Mukupenga kwake kwakadamburwa munhu anozvizivisa nenzira mbiri idzi: mari nerudo.
Nyika yemazuva ano, nekusunungura manzwiro, yakangokwanisa kuikurudzira. Izvo isu zvatinoda ndiyo dzekare dura.
Kana zviri zvebonde, raingove izwi raishandiswa mumabiko ekutaurisa mufaro unovaraidza kwechinguva uye ndokusiya rimwe richinyura kupfuura pakutanga ... kunze kusvikira yaita diki.
Chakanga chiri chitsva maari chaisava chishuwo, asi kunamatwa kune nzara ... Akamhanya kunge bacchante, bacchante uyo akamhanya nemusango achitsvaga Iacco, achitsvaga turgid phallus iyo pakange pasina kuzvimiririra kuda kwake, sezvo aingova murandakadzi wemukadzi chete. Iye murume, mumwe nemumwe anofungidzirwa, aingove mushandi wetembere.
Zvinotaridza senge kuti munguva pfupi iri kutevera varume vachange vasina basa pamusoro penyika, panenge pasisina chinhu asi michina.
Kubatwa chibharo! Mumwe aigona kubatwa chibharo asina kana kumbobatwa. Kubatwa nemazwi akafa akazove anonyadzisa, uye nemafungiro akafa ayo akazove obsessions.
Ndiye murume anokanganisa Nyika. Inorasira dendere rayo yega. Vanhu chete ndivo vanosvibisa.
Handifunge kuti zvinokuvadza mukadzi zvakanyanya kuvata naye pane kutamba naye ... kana kutomuudza nezvemamiriro ekunze. Icho hachisi chinhu kunze kwekutsinhana kwekunzwa panzvimbo yemafungiro, saka nei?
Zvepabonde uye yekudyira. Ivo vanogara nguva imwe chete, vanogadzira zvakafanana maitiro, uye vanouya kuzoreva zvakafanana chinhu.
Akafarira ndangariro yekunzwa kwenyama yemurume ichimubata, kunyangwe kuomarara kweganda rake paari. neimwe nzira yaive yekunzwa kutsvene.
Asi ndozvazvinoita varume. Asina kuonga uye anogara asingagutsikane. Kana vakavaramba, vanovenga nekuti ivo vanovaramba, uye pavanotera, vanovenga nechimwewo chikonzero. Kana pasina chikonzero.
Aive akaita sango, kunge rima dandemutande remiouki matavi, iine kushevedzera kusinganzwisisike kwezviuru zvemabukira anotumbuka. Zvichakadaro shiri dzakarara mumutanda wakakura weye labyrinth yemuviri wake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » DH Lawrence. Mudiwa waLady Chatterley mumitsara gumi neshanu.
Kusarudzwa kwekuverengwa naBarack Obama